I-Ray Donovan Isizini 8: Imininingwane Odinga Ukuyazi Njengamanje! - Ukuzijabulisa
Isiqephu sokugcina sochungechunge lwethelevishini iRay Donovan sisakazwe ku-Showtime. Ngokuphothulwa kwesizini yesikhombisa yomdlalo odumile wesiqephu sangoLwesihlanu ebusuku, esiphendule imibuzo ethile mayelana nobuntwana bukaRay nokuthi waba kanjani lowo anguye manje, uhlelo lwaphela.
Ngemuva kokuphothulwa kweSizini 7, uhlelo lwahoxiswa kungazelelwe, lwashiya abalandeli, umlingisi uLiev Schreiber, kanye nomdidiyeli wezinhlelo uDavid Hollander besebumnyameni ngokwenzekile. Ngenxa yalokhu, ukuguqulwa kwe-cinematic kwadingeka ngokuphelele.
Isinqumo senziwe ukubopha zonke iziphetho ezixekethile kanye nokuveza ukuthi ngabe abakwaDonovan bahlose ukulwa kuze kube sekufeni noma bahlose ukwehla belwa noma cha ngemuva kokukhala okukhulu. Phela uRay ungumuntu onamathelayo ngokungashiyi lutho ophenyweni lwakhe.
Noma ubani omusha emsebenzini kaRay Donovan kufanele aqaphele ukuthi ungumlungisi ochwepheshe, okusho ukuthi unakekela izici ezingathandeki zezenzo zobugebengu ukuze avikele amakhasimende osaziwayo abasebenzisa izinsizakalo zakhe. Ngaphakathi kwedrama, sifunda futhi ngokusebenzisana phakathi kwezingane zikaRay nezingane zakubo kanye nomkakhe kanye nenzalamizi eyesabekayo yomndeni, uMickey, edlalwa uJon Voight, okhululwe kungazelelwe ejele.
Ngemuva kokuphothulwa kweSeason 7, ifilimu iqhubeke lapho igcine khona ngoLwesihlanu. UMnu. Mickey Donovan ugijima, futhi indodana yakhe imlandela nakho konke enakho.
Ngakolunye uhlangothi, uMickey uyena owashona ngenxa yomphumela owawungalindelekile walokho kungqubuzana. Esikhundleni sokuthi uRay abe ngumsunguli wokubulala kulokhu, indodakazi kaRay, uBridget, nguyena onecala.
Lapho bebuzwa ukuthi kungani bekhethe ukubulala umlingisi odlalwa uJon Voight efilimini, u-Schreiber kanye nomqondisi u-Hollander bachaze isinqumo sabo engxoxweni ne-TV Line.
Sobabili sasazi kusukela ekuqaleni ukuthi othile kwakufanele ahambe ekupheleni kosuku, futhi uDavid wavumelana nami kulelophuzu. Enye indlela ethokozisayo nengokwemvelo ibonakala sengathi yenza uBridget azuze ifa [lomndeni wakwaDonovan] lokulila [ngokubulala uMickey], njengoba u-Schreiber abonisa.
Ngaphezu kwalokho, u-Hollander wathi ngokubona kwami, lokho kwakuwukuphela kokufa okungenzeka… Ngenxa yalokhu, u- [Bridget] kuzomele kube nguyena ozokhipha isibhamu. Sizama ukwehlisa yonke into ngokwendikimba, futhi ubani onaka uRay? nguBridget ngakolunye uhlangothi locingo.
U-Hollander ukholelwa ukuthi ukube i-series iqhubekile ngesizini yesishiyagalombili, ukukhetha ukuyimisa bekuzoba nzima kakhulu ukuyenza.
Kuwukuthi ukungabikho noma ubunjalo obungachazwa bokwenzeka bekubaluleke kakhulu kunomcimbi ngokwawo. Indaba, ngakolunye uhlangothi, imayelana nokungaphezu nje kwefa lobudlova; imayelana nombuzo othi Ngubani impisi? Ake ungitshele ukuthi ubani lona oxova ngempela ibhodwe? Ungangitshela ukuthi ubani ngempela oxova ibhodwe? Sibone kudingekile ukuthi sidonse ukunaka kukaRay ekuzibandakanyeni kwakhe nalokhu ngoba, ngandlela thize, uyi-antihero evelele kulaba ababili. Ngaphandle kwalokho, ungumsunguli wengxenye ebalulekile yalokho esikubona ohlelweni.
Dare Me Isizini 2: Izibuyekezo Odinga Ukuzazi Namuhla!
USchreiber wavumelana nombono wami. Ingxenye yohlelo ekhuluma ngokuhlukumezeka ngokofuzo engiyithanda kakhulu yile ekhuluma ngokunukubezwa ngokocansi. Kulesi sigaba, sizoxoxa ngezindlela eziqaphelayo nezingazi lutho esidala ngazo futhi sikhiqize kabusha ukuhlukumezeka. Sikukhuthaza kanjani futhi sikuphindaphinda kanjani ukuhlukumezeka. Sikukhuthaza futhi sikukhiqize kanjani kabusha ukuhlukumezeka.
Uhlu Lwadlalwayo Lwesibhedlela Isizini 3: Izinto Odinga Ukuzazi!
I-Denver Broncos Net Worth: Izinto Odinga Ukuzazi!